कस्ले कस्तो सपना देख्छ ? महिला र पुरुषले किन फरक फरक सपना देख्छन् ? | Rajmarga
कस्ले कस्तो सपना देख्छ ? महिला र पुरुषले किन फरक फरक सपना देख्छन् ?
सपना सबैले देख्छन्, तर कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि के हामी हरुलेजस्तै सपना देख्छौ ? अध्ययनकर्ताहरुका अनुसार महिला र पुरुषको सपना एकअर्काको भन्दा फरक हुने गर्दछ ।
जर्मन शहर मानहाइमस्थित सेन्ट्रल इन्स्टिच्युट फर मेन्टल हेल्थका प्रोफेसर मिषएल श्रेडलका अनुसार ‘पुरुष अक्सर यौन र आक्रामक विषयहरुसँग सम्बन्धित सपना देख्ने गर्दछन् र तर महिलाहरुले भने घरेलु काम र कपडाको बारेमा सपना देख्ने गर्दछन् ।
जर्मनीमै फाल्स क्लिनिकमा निद्रामाथि शोध गर्ने केन्द्रका प्रमुख हंस गुन्टर वीसका अनुसार पुरुषहरुको सपनामा अपरिचित व्यक्ति देखिने बढी सम्भावना रहन्छ । जबकि महिलाहरु अधिकांश उनीहरुलाई नै देख्ने गर्दछन्, जसलाई उनीहरुले विश्वास गर्ने गरेका हुन्छन्।
अध्ययनहरुका अनुसार केटाकेटीले सपनामा अक्सर जनावर देख्ने गर्दछन् ।
कसरी आउँछ सपना ?
यस विषयमा अनेक मिथक छन् । कसैले भनेका छन् कि सपनाको वास्तविकतासँग कुनै लिनुदिनु छैन कतिको मान्यताअनुसार सपना हाम्रो अनुभवकै झलक हो र यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण छैन । वैज्ञानिकहरुको कुरा मान्ने हो भने निद्राका कयौ चरण हुन्छन् । यसलाई आम बोलीचालीमा कच्चा निद्रा र पक्का निद्रा भन्ने गरिन्छ । पक्का निद्रामा दिमाग यति शान्त भइसकेको हुन्छ कि सपना देख्दैन । कच्चा निद्रामा धेरै हलचल हुन्छ । यसक्रममा आँखामा परेला पनि हल्ली रहन्छ । यसलाई रैपिड आई मुभमेन्ट वा आरइएम भन्ने गरिन्छ । यो अवचेतन मनको स्थिति हो ।
वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् कि जागा हुनु र आरईएमको बिचमा एउटा चरण हुन्छ । जब राम्रो सपना देखिन्छ, त्यसलाई चेतना र अवचेतनाको बिचको स्थिति भनिएको छ। यो एउटा यस्तो स्थिति हो जसमा व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि उ सपना देखिरहेको छ र यदि उसले कोशिस गर्ने हो भने आफ्नो सपनामाथि नियन्त्रण पनि गर्न सक्दछ । एएफपी
Previous post: वैदेशिक रोगजारीमा ठगिएकाको उजुरी बढ्दै
Next post: जापानमा भाडाको साथीसँग बह पोख्ने चलन बढ्दो, बह सन्नेको कमाइ मस्त
कस्ता पुरुष चाहन्छन् महिला ? यी हुन् महिलाले बढी ध्यान दिने विषय
अँधेरो नै किन रोजिन्छ सेक्सका लागि ? यस्तो रहेछ रहस्य
सन्तान अग्लो चाहियो, श्रीमति टाढाबाट ल्याउनुस्
तपाईलाई थाहा छ महिलाहरुले केटा आकर्षित गर्ने गुण यसरी प्राप्त गरेका हुन्छन् ?
तपाई ग्यास्ट्रिक पीडित हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यी उपाय अपनाउनुस्